StartLogic dia orinasa mpampiantrano monina oa Phoenix, Arizona. Door orinasa dia naorina tamin’ny novambra 2003 avy amin’i Thomas Gorny ary dia ankehitriny ampinany amin’ny Vondrona Iraisam-pirenena Maharitra (EIG).
2 Quick StartLogic Review
Eny, izaho tsy. Mbola tsy naheno momba ny orinasa fandraisam-bahiny aho mandra-pahitako ny fikarohana nataoko tamin’ity tranonkala ity tao amin’ny 2008. Nanao sonia taona iray nanaovana fifanekena tamin’i StartLogic aho tamin’nyy hijaery hija Araka ny voalazan’ny reveko taloha, izay navoaka tamin’ny nov 2008, ny rakitra an-tserasera StartLogic dia tao anatin’ny 99,85 – 99,9% – tsy dia ratsy loatra ho an’ny host $ 5,95 / mo saingy azo antoka fa tsy beste webhost na. Ny fanohanan’ny mpanjifa dia somary kely miadana, saingy amin’ny ankapobeny dia manampy sy namana ny mpiasa.
Mitombo ny vidiny aorian’ny fe-potoana voalohany – ny fe-potoana 24-volana dia manavao amin’ny $ 6,98 / mo
Iza geen Startlogic?
Amin’ny maha mpanome tolotra tranonkala mora vidy, ny Startlogic dia manolotra fahatokian-tena mety sy endri-javatra tsara sasany toy ny mpanamboatra tranokala ary fahazoan-dàlana amin’ny dokambarotra maimaim-poana. Na izany aza, tsy misy làlana fampivoarana manan-danja izany, izany hoe raha maniry ianao dia mila manana izany mifindra any amin’ny web host iray.
Manomboka amin’ny $ 2,75 / mo, ny Startlogic dia azo antoka fa iray amin’ireo alternatieven webhosting mora kokoa manodidina. Aza adino fa ny vidin’ny mitombo hatramin’ny $ 5,50 / mo aorian’ny vanim-potoana fisoratana anarana.
Tsia, Startlogic dia manolotra drafitra karama fotsiny. Izy ireo dia ahitana karazam-pifandraisana maro miaraka amin’ny drafitr’izy ireo, oa koa ny anarana anarana maimaimpoana.